Xorriyadda Xadgudubka: Nooc Ka Duwan CMS | Martech Zone
Inta badan websaydhada casriga ahi waxay adeegsadaan CMS (Nidaamka Maareynta Mawduuca) si loogu oggolaado maamulayaasha websaydhku inay isbeddel sameeyaan, ku dhajiyaan waxyaabaha, ayna maareeyaan websaydhka. Tani waxay ka duwan tahay maalmihii hore ee wicitaanka hay'addaada qaabeynta si loo helo isbeddelo la sameeyay, kuwaas oo qaali noqon kara isla markaana sababi kara dib u dhac ku yimaada cusbooneysiinta. Halka maareynta bogga hore wuxuu u ahaa boqortooyada kaliya shakhsiyaad xirfad sare leh (mararka qaarna loo yaqaan "webmasters"), CMS waxay u fureysaa xakamaynta xubnaha aan farsamada ahayn ee urur, sida agaasimaha suuq geynta, kaaliyaha maamulka, ama xitaa agaasimaha guud.
At SpinWeb, waxaan ka abuureynaa bogagga shabakadda Xoriyada Accrisoft madal. Xorriyaddu waa CMS oo xoogaa gaar ah oo waxay leedahay faa'iidooyin aad u fiican oo ka sarreeya qaar ka mid ah ciyaartoyda kale. Indianapolis waxay umuuqataa inay tahay magaalo WordPress waxaanan arkaa shirkado badan oo u adeegsanaya sidii websaydh. Ma jiraan wax khalad ah oo WordPress ah iyo runti aniga ah barta shaqsiyeed iyo barta hadalka waxaa lagu dhisay WordPress. Si kastaba ha noqotee, Xorriyaddu waxay leedahay xoogaa faa'iidooyin ah oo gaar ah markay tahay adeegsiga, qoto-dheerida astaamaha, iyo taageerada. Waxaan ku raaxeystaa xaqiiqda ah inaan nahay mid gaar ah oo aan u isticmaalno Xorriyadda maaddaama ay tahay xulashadeena, gaar ahaan ururrada waaweyn ee dalbanaya in ka badan meelaha furan ee furan sida caadiga ah.
Nidaam Maareyn Mawduuc leh Taageero
Hal shay oo fiican oo ku saabsan Xorriyadda ayaa ah inay tahay si buuxda loo taageeray oo uu ilaaliyo Xakamaynta. Waxaa jira koox horumarineed oo heegan ah oo mushaar loo siinayo si loo abuuro astaamo cusub, loo kordhiyo modullada jira, isla markaana loogu beddelo jawaab celinta macaamiisha madal awoodsiisa ururada inay ku wada xiriiraan khadka tooska ah. Accrisoft waa shirkad aad u wanaagsan waxaanan wada hadalo badan la yeeshay agaasimaha guud Jeff Kline ku saabsan mustaqbalka barnaamijka iyo guud ahaan ganacsiga internetka.
Xuquuqda 'codebase' waxaa laga riixayaa xarun dhexe oo xaqiijineysa in rakibid kasta ay joogto tahay. Iyada oo leh aalado badan oo furan, qaabka caadiga ah ayaa ah in la sameeyo 50 + degello internet oo kala duwan oo dhammaantood wada adeegsanaya noocyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah, noocyo kala duwan ah, iyo haakooyin kuwaas oo markaa noqonaya qarow si loo ilaaliyo hay'ad ahaan. Xorriyaddu waxay SpinWeb u oggolaaneysaa inay taageerto oo ay ilaaliso tiro aan xadidnayn oo bogag internet ah iyada oo aan laga walwalin iswaafaq-waagga u dhexeeya Sababtoo ah dhammaan barnaamijyada waxaa lagu martigeliyaa daruuraha, macaamiisheennu uma baahna inay ka walwalaan ku rakibidda software kombiyuutarradooda. Waxay si fudud u geli karaan oo ay u shaqo tegi karaan. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ku casriyeyn karnaa macaamiishayada boggeena daqiiqado gudahood markii noocyada cusub ee Xorriyadda la sii daayo.
Isdhexgalka Isticmaalaha Wanaagsan
Xorriyadu sidoo kale waxay leedahay interface isticmaale aad u fiican. Inkasta oo qaar ka mid ah aaladaha furan ee furan ay jahwareer ku noqon karaan isticmaalayaasha dhammaadka, Xorriyadda waxay soo bandhigeysaa is-dhexgal nadiif ah, fudud oo ka dhigaya mid aad u fudud dadka aan farsamada ahayn inay maareeyaan boggooda internetka.
Moduleyaal la badin karo oo loogu talagalay Emailka, Foomamka, Ganacsiga iyo waxyaabo kale oo dheeri ah
Xorriyadda waxay bixisaa dhowr qaybood oo awood leh oo si habsami leh u dhexgala qaybaha kale ee bogga. Tusaale ahaan, Xorriyadda waxaa ku jira dhisme Qaybta Suuqgeynta Emailka, kaas oo milkiileyaasha degellada siinaya xal Suuqgeyn Email oo dhameystiran oo gaar loo leeyahay oo lagu dhisay isla bogga. Waxaa ku jira arrimo, jadwal, maareynta macaamiisha, iyo tirakoobka gudbinta oo isla markiiba lagu dhisay. Waxay sidoo kale xog ka soo qaadataa qaybaha kale si suuqleydu ugu diraan olole liisaska laga soo saaray qaybaha kale ee goobta, sida diiwaangelinta dhacdooyinka.
The Foomamka moduleka in Freedom waa mid aad u awood badan oo la tartamaya qaar badan oo ka mid ah qaab dhismeedyada istaandarka ah ee la heli karo maanta. Xoriyadda, maamulayaasha degellada aan farsamada ahayn waxay dhisi karaan foomam adag (ama fudud) oo loogu talagalay codsiyada, diiwaangelinta dhacdooyinka, tabarucaadka, iyo hoggaaminta qabashada dhammaantood iyadoo la adeegsanayo qasabno yar. Xogta foomka ah ayaa markaa la farsameyn karaa loona dhoofin karaa siyaabo kala duwan ama xitaa lagu dhex dari karaa gawaarida dukaamaysiga ee codsiyada e-commerce ee horumarsan.
Dhismaha gaadhigiina shopping in Freedom sidoo kale waxay u oggolaaneysaa ganacsiyada inay ku dajiyaan xal isku dhafan e-commerce bogaggooda internetka isla markaana ay ku iibiyaan wax soo saarka dadaal ugu yar. Tani waxay sidoo kale kordhin kartaa diiwaangelinta dhacdooyinka, taas oo u oggolaanaysa hay'adaha inay ka iibiyaan diiwaangelinta dhacdooyinka ayna aqbalaan kaarka deynta ama lacag-bixinta elektaroonigga ah.
Xorriyadda waxay ka kooban tahay qaybo Blogs, Jadwalka Dhacdooyinka, War-Saxaafadeedyada, Podcasts, Forums, Tusaha, RSS, Barnaamijyada gacansaarka, Biilasha, iyo Codbixinta, inaad magacowdo waxyar oo ka mid ah xulashooyinka kale ee nidaamka. Intaa waxaa sii dheer, qaybaha badankood waxay la midoobi karaan shabakadaha bulshada ee hormuudka ka ah, taas oo macnaheedu yahay in cusbooneysiinta degelku si toos ah toos ugu riixi karto Twitter, Facebook iyo LinkedIn.
Xorriyaddu waa nidaam aad u ammaan badan. Kaliya maahan codsi si fiican loo tijaabiyay oo qallafsan, laakiin sidoo kale waxay leedahay muuqaal maareyn badan oo adeegsadeyaal badan, oo u oggolaanaya maareeyayaasha bogagga badan inay yeeshaan doorar kala duwan iyo heerar marin u helid ah. Waxay sidoo kale leedahay module-ka shaqada, kaas oo u oggolaanaya tifaftirayaasha inay oggolaadaan ama diidaan isbeddelada ka hor intaysan noolaan.
Goobaha Ururka Xubinnimada
Waan murugoon lahaa haddii aanan sidoo kale iftiimin xalka ugu fiican ee Xorriyadda ee ururada ku saleysan xubnaha, sida ururada. Qeybta xubinnimada ee Freedom waxay u oggolaaneysaa kooxaha ku saleysan xubinta inay maareeyaan xog-ururin buuxda oo xubnaha ah una oggolaadaan xubnahaas inay ilaashadaan akoonadooda isla markaana ay cusbooneysiiyaan shabakadda. Module wuxuu sidoo kale u oggolaanayaa biilka xubinta, CRM, suuqgeynta, iyo isgaarsiinta. Ganacsiyadu sidoo kale waxay u isticmaali karaan keyd ahaan macluumaadka macaamiisha runtiina SpinWeb dhammaan keydkeeda macmiilka iyo nidaamka biilasha waxaa lagu maamulaa iyada oo loo marayo Freedom, oo lagu dhammaystiray qaan-sheegashada emaylka, biilasha soo noqnoqda, iyo lacagaha internetka.
Sida aad u aragto, faa'iidada weyn ee aad u leedahay isticmaalka Xorriyadda ayaa ah in wax walba hal meel ku yaalliin. Kahor intaan nala shaqeynin, inbadan oo kamid ah macaamiisheenu waxay adeegsanayeen aalado kala duwan oo loogu talagalay suuqgeynta emaylka, ganacsiga elektaroonigga ah, baloog garaynta, diiwaangelinta dhacdooyinka, waxyaabaha ku jira websaydhka, iyo maaraynta xubinnimada. Ka dib markay u wareegaan Xorriyadda, waxay jecel yihiin fududeynta isticmaalka iyo waxtarka (oo aan lagu xusin kaydinta kharashka) haysashada wax walba hal meel.
Nidaamka Maareynta Mawduucyada Raadinta Mashiinka Raadinta
Xorriyadda sidoo kale waa mid aad u raadiya mashiinka raadinta. Websaydhada ku saleysan xorriyadda waxay adeegsadaan "HURLs" (URL-yada la akhrin karo ee Aadanaha) taas oo macnaheedu yahay in waxyaabaha ku jira lagu dari karo matoorada raadinta si aad u fudud. HURLs waxay gacan ka geysaneysaa kor u qaadista darajooyinka degel ee matoorada raadinta iyo sidoo kale aad ugufiicna bini aadamka marka loo eego URL-yada caadiga ah ee keydka keydka u ah nidaamyada kale. HURLs ee Xorriyadda gabi ahaanba waa la beddeli karaa.
Maaddaama oo loo ogol yahay Bixiyaha Xalka ee 'Accrisoft Solution', SpinWeb wuxuu awood u leeyahay inuu si deg deg ah u geeyo websaydhyo iyo tayo joogto ah markasta oo ay ugu wacan tahay halbeeggeenna ku saabsan Xorriyadda. Macaamiishayadu waxay jecel yihiin fudaydka isticmaalka, is-dhexgalka xoogga badan, iyo heerka xakamaynta ee ay hadda haystaan ​​markay maamulayaan degelladooda internetka.
Tags: isdhaafsashoxorriyadda accrisoftsentimitirnidaamka maamulka contentxargaha
Hanti Ma guurtada & Isdhexgalka Warbaahinta Bulshada
Jun 20, 2011 at 2: 52 PM
Waan jeclahay Freedom CMS! Farriin weyn.